'Sheekada Naxdinta leh ee Mareykanka' waxay la wadaagaysaa Jees jees waxayna bilaabeen duubista xilli 10
Bogga ugu weyn Warar Naxdin Leh 'Sheekada Naxdinta leh ee Mareykanka' waxay la wadaagaysaa Jees jees waxayna bilaabeen duubista xilli 10
Story naxdin baa American ayaa taageereyaashu ku dhex martay dhaqdhaqaaqyada. Tixraacyada ku saleysan anthology waxay soo martay dariiqooyinka noocyada sagaal xilli oo kala duwan. Mid kasta, dariiqa noo horseedaya noocyo-hoosaadyo u dhexeeya 80 'slaslas' ilaa heshiisyo saaxirad iyo wax kasta oo u dhexeeya. Hadda waxay umuuqataa Sheekada naxdinta leh ee Mareykanka xilli tobnaad ayaa soo saaray wax soo saar.
Abuuraha, Ryan Murphy wuxuu soo dhigay barta 'Instagram' si uu ula wadaago xoogaa cabsi leh kalluumeysato kalluumeysi ah oo ilko u eg oo ay weheliso farriin lagu cusbooneysiinayo taageerayaasha.
“Waxay umuuqataa Story naxdin baa American Xilliga 10-aad ayaa loo amba-qaadayaa soosaarista bisha Oktoobar (ku habboon). Waad ku mahadsan tahay qof kasta oo si adag u shaqeynaya si loo hubiyo bilowga nabadgelyada ee kooxda iyo shaqaalaha. Haa waa tan tilmaam. ” Murphy ayaa qoray.
Weli wax hadal ah lagama haynin mowduuca tobnaad uu la socon doono. Waan ognahay inay dhici karto inay ka dhacdo badda. Xaqiiqdaas oo lagu daray kalluunka Daagoon ilkaha la fiirinayo Murphy la dhajiyay waxay noo horseedaysaa inaan aaminsanahay in xilligan soo socda uu noqon doono HP Lovecraft iyo naxdin biyo ku dheehan tahay.
Taasi waa mala awaal dabcan. Si kastaba ha noqotee, badda iyo ilkaha, oo ay weheliso xaqiiqda ah in Lovecraft uu dhowaan noqday isbeddel dhammaantood waa tilmaamayaal wanaagsan.
Maxaad u maleyneysaa ragga xilli 10aad Story naxdin baa American ku saabsan yahay Noo soo sheeg qaybta faallooyinka.
Ma u harraadsan yahay naxdin badan oo biyo ah? Halkan guji.
84Story naxdin baa AmericanCovennidaamRyan Murphy
Waxqabadka cusub ee 'Paranormal Act' ayaa ku dhawaaqaya Taariikhda la siidaayo
'Istaagga' wuxuu helaa filimka 'Traaser Trailer' ee ugu horreeya